शब्द ऋण के मतलब छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki छुटकारा ऋण
व्यय ऋण के हो?
एक छुटकारा ऋण "व्यय" शब्द समावेश गर्दछ, जसको अर्थ वित्तीय उद्योग को रूप मा "निश्चित उपयोग" को रूप मा अधिक छ र यसैले मुफ्त उपयोग को लागि उपलब्ध छैन। यो राज्य सब्सिडी हो, जुन देशहरू वा नगरपालिकाहरू द्वारा संभाला गरिन्छ। क्रेडिटिस्टल्ट फेर विइडेरौफेउको लाभार्थी मुख्यतः प्रायः परिवार वा व्यक्तिसँग हेरविचार गर्ने परिवार हुन् जुन पहिले नै मालिक वा सम्पत्ति खरीद गर्न चाहन्छ। ऋण एक परिवार को आय को अनुसार निर्धारित हुन्छ र कुनै पनि मामला मा दोबारा हो। क्रम मा उधारकर्ताहरु लाई धेरै अधिक ओवरलोड गर्न को लागी नहीं, ऋण को तुरुन्त रूप मा किश्त नहीं चुकाएको छ जस्तै ऋण संग सामान्य छ, तर एक पछि को अवधि मा। यो उनीहरूको रूपान्तरण वा सम्पत्तिको खरीदको पहिलो चरणमा आवेदकहरूलाई छुट्याउने उद्देश्य हो। अर्को महत्त्वपूर्ण फायदा मध्यम ब्याज दर हो, जुन घर बैंकको ऋणभन्दा कम हुन्छ।
अचल सम्पत्ति कोषको लागि व्यय ऋण
यदि परिवारले सम्पत्ति खरीद गर्न वा यसलाई निर्माण गर्न निर्णय गर्दछ भने, यो दावी ऋणको दाबी गर्न सक्नुहुन्छ। यसले वित्तपोषणको साथ मद्दत गर्दछ र, विशेष गरी सुरुमा, केही रकमको अंतराल बन्द गर्दछ। राज्यले सम्पत्तिको मूल्यलाई खातामा लिन्छ। एकै ओर, यो क्षेत्र मा निर्भर गर्दछ, किनकी सानो जीवित ठाउँ उपलब्ध छ, त्यसैले भविष्य-आधारित आवास बनाइन्छ। विलायक नागरिकहरूले नगरपालिका र क्षेत्रलाई लाभ उठाएमा, यदि तिनीहरू स्थायी रूपमा बस्छन् भने। अर्को पक्ष पारिस्थितिक परिस्थितिको विचार हो। राम्रो इन्सुलेशन, उदाहरणका लागि, अवस्थित गुणहरूमा पनि पदोन्नति गरिएको छ र नयाँ भवनमा समावेश हुनुपर्छ। यसले ऊर्जा खर्च घटाउन सक्छ।
व्यय ऋण पनि पीढी घरको सेवा गर्दछ। एक छत अन्तर्गत धेरै पीडितहरूका लागि जिन्दगी, यो भन्न सकिन्छ कि सम्पत्ति बाधा-रहित छ। सबै पछि, सबै पीडितहरू सबै भन्दा राम्रो, सेवानिवृत्ति उमेर सम्म पुग्छन् र बाधा-मुक्त पहुँचमा निर्भर हुनेछ। यी उपायहरू फ्ल्याक फ्ल्याटमा लिफ्टहरू, घर र जीवनका लागि पहुँच रैंपहरू, बाथरूम र भान्सा जस्ता गीला कोठाहरूको संरचनाहरू।
साथै सार्थक अक्षय ऊर्जामा रूपान्तरण हो। जो अझै पनि आफ्नो घर मा पुरानो कोइला स्टोव संग खाएको छ, खर्च ऋण को माध्यम ले, भविष्य मा आफ्नो ऊर्जा को एक गोली गोली को रूप मा सुरक्षित को संभावना हो। त्यस्तै गरी, फोटोवोल्टिक प्रणालीहरूको खरीद बढावायो। उद्देश्य उत्सर्जन को कम गरेर नियंत्रण को तहत जलवायु परिवर्तन प्राप्त छ।
कहाँ खर्च को लागी आवेदन को लागी
व्यय लोन सामान्यतया सीधा सम्पत्ति को वित्तीय प्रशासक द्वारा अचल सम्पत्ति को वित्तपोषण को डिजाइन मा लागू गरिन्छ। उदाहरणका लागि, हैम्बर्गमा, यस लगानीको लागि लगानी र विकास बैंक (आईएफबी) जिम्मेवार छ। डसेलडोर्फमा, अर्कोतर्फ NRW बैंक सामाजिक आवास पदोन्नतिको लागि जिम्मेवार छ। म्यूनिखमा, जानकारी प्रत्यक्ष रूपमा नगर पालिकाबाट उपलब्ध छ। यसको अतिरिक्त, यस विभागका सबै रियल एस्टेट एजेन्ट र सल्लाहकार सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा सेवा गर्छन्।
भुक्तानी मोडलहरू आवेदकहरूका लागि विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यो पदोन्नति कारण र क्षेत्रका परिस्थितिबाट भिन्न हुन्छ। आधार विधायी द्वारा निर्धारित गरिएको छ, तर लान्डरले केहि प्रावधानहरूलाई क्षेत्रीय परिस्थितिमा अनुकूलन गर्न अधिकार प्रदान गर्दछ। पुनरावृत्ति अवधि पदोन्नतिको पाँचौं वर्षको औसतमा सुरु हुन्छ। व्यय ऋण एक शटमा जारी गरिएको छैन, तर 16 वर्षमा विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै, हैम्बर्गको उदाहरणमा। भुक्तानीको पहिलो 20 वर्षमा, ब्याज दर कम छ। उच्च ऋणको कारणले भुक्तानी गर्न लामो समयको आवश्यकता पर्दछ जुन ब्याज दर बढेको छ।
अघिल्लो लेखअसाधारण परिशोधन
अर्को लेखअर्डर वित्त